ကြာသပတေးနေ့ | PoemsCorner
အကယ်၍ ငါမင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်
ကြာသပတေးနေ့ မှာတော့မင်းကို ငါမချစ်တော့ပြန်ဘူး
တကယ်တော့ ငါမင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ချစ်ခဲ့တာပါ။ငါ တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကရော
အက်နာ စိန့် ဗင်းဆင့် မစ်လေ( Edna St.Vincent Millay)၏ Thursdayကို ပြန်ဆိုသည်
In: ကဗျာ Posted By: thukuma Date: Dec 30, 2011
ချစ်ခြင်းရဲ့ အခြား တစ်ဖက်
Leave comment9Comments & 167 views
By: ei lay at Dec 30, 2011
ကဗျာက ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတော့ သေချာမသိဘူးဗျ
ဒါပေမယ့် ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်လို့မြင်ပါတယ် ။
ကဗျာက ရိုးရိုးလေးလေးဗျ။ ဒါပေမယ့် အတွေးနက်တယ်။ ပို့(စ်)မော်ဒန် အတွေးတွေပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ပေါ့ဗျာ။ ကဗျာမှာ ဇတ်ဆောင်က ကဗျာဆရာကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတယ်။ကဗျာဆရာကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုယ်သူ ချစ်ခြင်းကို သံသယရှိသွားတဲ့သဘော။မသေချာမရေရာတဲ့(uncertainty)သဘော။ သံဝေဂရသွားတဲ့ သဘော။ ပို့(စ်)မော်ဒန်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အစဉ်အလာတန်ဖိုးတွေ(values ) ပျိုကြသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ဥပမာဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်ဆိုပါဆို့။ ဒီနေ့ချစ်တယ်ပြောပြီး၊နောက်နေ့ မချစ်ပါဘူးဆို ရင်ယှုတ္တိတန်ပါ့မလား။ယုတ္တိတန်တယ်ဆိုလျင်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားနူန်းစံတွေနဲ့ ကိုက်ညီပါ့မလား။ ပို့(စ်)တွေက ဒီနူန်းထား တွေကနေ ခွာကြည့်တယ်။ နူန်စံသစ်တွေနဲ့ လောကကြီးကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်တယ်။ဒီလိုပဲ ဒီကဗျာမှာ ကဗျာရေးသူက သူ့ကိုယ်သူ သံသယတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်တယ်။x-ray နားလည်ရခက်သွား သလိုပဲ ကဗျာဆရာက လည်းသူ့ကိုယ်သူနားရခက်သွားတဲ့သဘော။မသေချာတဲ့သဘော။သံဝေဂရသွားတယ်လို ကျွန်တော်ထင်မိပါ တယ်။ ကဗျာထဲမှာ ကဗျာဆရာက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို youလို့တင်စားပြီးပြောတာလား ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲ သူ့ချစ်သူကိုချစ်ပြီး ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ မချစ်တော့တာလား အဒီလိုမတင်မကြလုပ်ထားတယ်။ဒါကိုက ကဗျာဆရာပေးချင်တဲ့ရသ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။မူရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ဖတ်လို့ရအောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျေှးဇူး
By: thukuma at Dec 30, 2011
အခုလို ကဗျာအကြောင်းလေးကို သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင်လည်း sorry ပါ ။
By: sharon myorr myor at Dec 30, 2011
x-rayရဲ့ကွန်းမန့်ကို ကျွန်တော် တကယ်ကျေးဇူးတင်တာပါ။ စိတ်အနှောက်မယှက်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ခုလို တရေးတယူဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျွန်တ်ာဖတ်ဖူးတဲ့ reader-respond theoryဆိုတာလေးရှိ တယ်ဗျ။ဖတ်သူတုန့်ပြန်သီအိုရီပေါ့။ စာဖတ်သူမှာမြင်တဲ့အတိုင်းသုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့ဗျာ။ ကျွန် တော်လည်း ကျွန်တော့်အမြင်ကို ဖလှယ်တဲ့ပသဘောပါပဲ။ ခုလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မြင်တာလေးတွေ ပြောနိုင်တာ သိပ်ကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကဗျာကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုလိုက်တာပါ။လိုတာများရှိလျင်လည်း ကျွန်တော့်ကိုဖြည့်စွက်ပေးစေလိုပါတယ်။ တစ်စုံတခု ရတယ်ဆိုလျင်လည်း မူရင်းကဗျာဆရာကိုသာ ကျေးဇူးတင်စေလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကဗျာက တကယ့်ကို ဆန်ပါတယ်…
အဲ့ဒီလိုမျိုး ခဏခဏ ဖြစ်ဖူးတယ်
By: SoFarAwayFromU at Dec 31, 2011
bar tway hman ti dot bu,
shoke nay tar be.
chit chin le chit,,ma chit le nay dot.
By: ei lay at Dec 31, 2011
By: SoFarAwayFromU at Jan 1, 2012